အမေ့အိမ်: မြန်မာယူ-၂၀ အသင်း ပြိုင်ဘက်အသင်းများကို စတင်လေ့လာ
မြန်မာယူ-၂၀ အသင်း ပြိုင်ဘက်အသင်းများကို စတင်လေ့လာ
၂၀၁၅ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ယူ-၂၀ ကမ္ဘာ့ ဖလားပြိုင်ပွဲ၌ အိမ်ရှင်အသင်း နှင့် တစ်အုပ်စုတည်းကျရောက် လျက်ရှိသည့် မြန်မာအသင်းမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်းများ၏ ကစားပုံ ကို စတင်လေ့လာနေပြီး အမေရိကန်အသင်း၏ ကစားပုံကို အတော်အတန် သိရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအသင်း နည်းပြချုပ် မစ္စတာဂတ်ကပြောသည်။
မြန်မာယူ-၂၀ အသင်းသည် အိမ်ရှင်နယူးဇီလန် အပါအ၀င် ယူကရိန်း၊ အမေရိကန်အသင်းတို့ နှင့် တစ်အုပ်စုတည်း ကျရောက် လျက်ရှိပြီး အုပ်စုတွင်းပြိုင်ဘက် အသင်းများ၏ ခြေစွမ်းနှင့် ကစား ကွက်ပိုင်းကို လေ့လာနေပြီဖြစ် ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
‘‘အုပ်စုတွင်းပြိုင်ဘက် အ သင်းတွေရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ နည်းစနစ် ပိုင်းကို စတင်လေ့လာနေပြီ။ အ မေရိကန်ရဲ့ ခြေစွမ်းကို အတော် အသင့်သိရှိပြီးပြီ။ ကျန်တဲ့အသင်း တွေရဲ့ ကစားပုံကိုလည်း ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတွေကတစ်ဆင့် လေ့ လာနေတယ်’’ဟု မစ္စတာဂတ်က ပြောသည်။
မြန်မာအသင်းသည် တူရကီ နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့ကျင့်စဉ် အမေရိကန်နှင့် သြစတြေးလျတို့ ၏ ခြေစမ်းပွဲကို တိုက်ရိုက်ကြည့် ရှုခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် အမေရိ ကန်အသင်း၏ ခြေစွမ်းကို လေ့ လာခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းများအနေဖြင့် မြန်မာအသင်းထက် ခန္ဓာကိုယ် ပိုမိုတောင့်တင်းပြီး ကြံ့ခိုင်မှုပိုကောင်းသည့် အသင်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ကြံ့ခိုင်မှုကို ဦးစားပေးလေ့ကျင့်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နည်းပြချုပ် က ပြောသည်။
မြန်မာယူ-၂၀ အသင်းသည် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကြိုအဖြစ် ဂျာမနီနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ကာ လေ့ကျင့်မည်ဖြစ် ပြီး ခြေစမ်းပွဲများကစားရန်စီစဉ် ထားကြောင်း ဥရောပ ယူ-၂၀ လက်ရွေးစင်အသင်း (သို့) အင်္ဂ လန် လူငယ်ကလပ်အသင်းတစ် သင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခြေစမ်း ပွဲကစားရန် အဖွဲ့ချုပ်သို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ရေးသားသူ © အမေ့အိမ်အဖွဲ့ KING at 2:49 PM
အခမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေးဆီသို့
နေ့စဉ်သတင်းများ Oct (24) Nov (25) Dec (9) Jan (30) Feb (81) Mar (149) Apr (104) May (92) Jun (17) Aug (16) Sep (97) Oct (81) Nov (41) Dec (45) Jan (58) Feb (38) Mar (47) Apr (39) May (52) Jun (31) Jul (52) Aug (50) Sep (36) Oct (45) Nov (53) Dec (52) Jan (43) Feb (28) Mar (31) Apr (13) May (36) Jun (53) Jul (39) Aug (41) Sep (52) Oct (69) Nov (55) Dec (41) Jan (72) Feb (388) Mar (259) Apr (227) May (70) Jun (92) Jul (551) Aug (809) Sep (587) Oct (342) Nov (163) Dec (235) Jan (310) Feb (303) Mar (193) Apr (61) May (374) Jun (220) Jul (594) Aug (550) Sep (428) Oct (787) Nov (411) Dec (288) Jan (360) Feb (361) Mar (345) Apr (187) May (219) Jun (131) Jul (116) Aug (60) Sep (93) Oct (26) Nov (12) Dec (3) Jan (93) Feb (29) Mar (2)
ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ ဌာနများ
အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် အမြန်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဒို့နိုင်ငံသားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ် တာဝန်ကျေစွာ၊ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အတူကြိုးစားကြပါစို့....
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင်း – အပိုင်း (၁၇) - ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင်း – အပိုင်း (၁၇) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ တိဗက်ပြည်က မြှောက်ထားတဲ့ဆင်ခြေထောက်အောက်မှာရောက်နေသည့် ကြက်ဥနှင့် တူပ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ် ကန့်ကွက်ခံရ - နိရဉ္စရာ၊ ဇူလိုင် ၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်နေသည့် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) နေရာမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စစ်တွေ ခရိုင်ရွေးကေ...
DVB - ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ကို ဖိ... -
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း အိုဘားမား ရေးသား - နာမည်ကြီး အမေရိကန် သတင်းမဂ္ဂဇင်း တိုင်းမ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဩဇာအရှိဆုံး လူ ၁၀၀ ကို နှစ်စဉ် ရွေးချယ်ဖော်ပြလျက်ရှိရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်မှုတွင် မြန်မာ့ဒီမ...
- ဒီနေရာလေးက မြန်မာပြည်တွင်းမှာ သတင်းဖတ်လိုသူတွေအတွက် အဓိကရည်ရွည်ပါတယ်။လိုရာကိုရောက်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ပိတ်ထားတဲ့အရပ်ကဆိုရင် ပုံတွေဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာတန်ြး...
အမေ့အိမ်. Awesome Inc. theme. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.